Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Raadi Tubooyinka Jikada
2020 / 11 / 08 QoondayntaTilmaamaha qasabada 8983 0
Markii hore, qasabadaha jikada ayaa si fudud loogu baahan yahay; si kastaba ha noqotee, hadda waxay ku darsadaan qaab aragtida guud ee jikadaada. Waxaad ogaatay in bulaacadaha hadda la heli karo qaababka wareejinta, qorshooyinka, agabka, qaababka, iyo cabirka. Qiyaasta qiimaha ayaa si aan caadi aheyn u kala duwanaan doona, sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, haddii aad aaminsan tahay inaadan fursad u helin inaad ogaato qasabadaha jikada ee suubban, xaqiiqda kama fogaan kartid.
Loolanka adag awgood, marka lagu daro xaqiiqda ah in soo-saarayaashu ay tahay inay ka fekeraan qaabab cusub oo ay ku soo jiitaan macaamiisha, waxay sidoo kale u baahan yihiin inay damaanad qaadaan in alaabtooda lagu iibiyo qiime rafcaan leh. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u hesho qasabadaha jikada ee suubban waa inaad si adag u eegto.
Hal wado waa inaad raadiso soosaarayaasha qasabada xaafaddaada. Marka laga reebo soo iibinta tafaariiqleyda alaabtooda, soo-saareyaashani waxay had iyo jeer yeelan doonaan waji u jeeda macaamiil oo ay ku muujinayaan kuna iibinayaan wax soo saarkooda. Diidmada iibsiga qasabadahaaga si toos ah uga soo saarayaasha soo saarayaasha ayaa ah in walxahaan sida caadiga ah lagu iibiyo qiimo aad u jaban. Tafaariiqleyda ayaa wax ku dari doona qiimaha istiikarka kadib markay waxyaalaha ka helaan been abuurka, marka waxaad u baahan tahay inaad lacag badan bixiso markaad wax ka iibsaneyso.
Haddii arrinta ku saabsan wax ka iibsiga si sharci ah wax soo saarayaashu ay tahay in bakhaarkoodu, inta badan, ku yaal xarumaha qaybinta, markaa waxay ka tarjumaysaa inay si aad ah uga xiiso badan tahay in iyaga la eryo. Way ku caawin lahayd haddii aad u sii socoto si aad u hesho soo saarayaashaas; si kastaba ha noqotee, waa dadaal wax ku ool ah iyadoo la tixgelinayo wadarta lacagta aad keydin karto adoo ka iibsanaya si sharci ah.
Markii aad dhamaysato inaad u baahan tahay qasabadda jikada, ha noqoto qasabad bir ah oo la daaweeyay, qasabad naxaas ah, ama xitaa mid dareemayaal lagu soo rogay, waa inaad marka hore eegtaa dallacsiinta waraaqaha xaafaddaada. Waxaa laga yaabaa inaad haysato ikhtiyaar aad ku maamusho heshiisyo ay soo bandhigtay. Waxaa laga yaabaa inay nadiifinayaan alaabada ama ay siinayaan calaamadeyn aan caadi aheyn waqti aan fogeyn ama dabaaldeg kadib. Kuwani waxay noqon doonaan munaasabadaha ugu wanaagsan ee lagu helo xishoodkaaga madow matte hoos u soo jiido qasabadda jikada.
Muujinta feejignaanta marka aad iibsaneyso qasabadahaaga calaamadeysan ayaa ah inaad si fiican u hubiso si aad u dammaanad qaaddo inaysan jirin cillado. Sidoo kale waa in laga sameeyaa maaddooyin adag, markaa uma baahnid inaad ku adkaysato beddelka sida ugu dhakhsaha badan. Maaddaama ay u badan tahay inay jiri doonaan qaab-dhismeedyo kala duwan iyo qaabab gaar ah sidoo kale, waa inaad noqotaa mid cayiman oo aad hubisaa in qasabaddu ay ku habboon tahay inta ka hartay qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka jikadaada. Si kastaba ha noqotee, haddii lagu iibsaday qiimo ka jaban, waxaad, si kastaba ha noqotee, jeclaan lahayd inaad dammaanad ka qaaddo inay isku dubarido mawduuca guud ee jikadaada.
Ma aha wax adag in la helo tuubbooyinka jikada oo yar; si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad hawshaada qabato ka hor abuurista iibsigaaga. Waxaa loo baahan yahay oo si adag u laalaadaa heshiiska halkii aad ku degdegi lahayd inaad iibsato qasabadda jikadaada. Waqtiga saxda ah ee saxda ah, ma lahaan doontaa ikhtiyaarka aad ku heli karto nidaamka ugu fiican?
Hore:: Tilmaame ku saabsan Sida loo doorto Tuubada Jikada Next: Tilmaame ku saabsan Sida loo doorto Tuubbooyinka Jikada ugu Fiican
2021 / 02 / 03 12910
2021 / 02 / 03 9275
2021 / 01 / 28 4709
2021 / 01 / 28 10959